သက်တန့်ချို: Allergy အကြောင်းသိကောင်းစရာ
aaron scarlett September 24, 2010 at 1:10 PM
ံIS THERE ANY MEDICATION FOR HAY FEVER?
သက်တန့်ချို September 24, 2010 at 3:25 PM
အဓိကကတော့ allergen ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် exposure ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံပါပဲ ။ ကုသမှုတွေကတော့ Anti-histamine တွေပေးလို့ရပါတယ် ။ ဥပမာ Chlorpheniramine , Fexofenadine တို့လိုမျိုး နောက်ပြီး ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတွေလည်းရှိပါသေးတယ် ။ နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး Specific Treatment ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ September 25, 2010 at 6:05 AM
ပူးတေတို့က မောင်နှမ ၃ယောက်လုံး allergy ရှိတယ်... အဖေအမေမှာတော့ တခါမှ ဖြစ်တာမတွေ့ဖူးဘူး.... ၃ ယောက်ထဲမှာ အစ်ကိုနဲ့ ညီမလေးက သိပ်မဖြစ်ဘူး... ပူးတေက အဆိုးဆုံး... မှတ်မိတာက ၆ တန်းနှစ်မှာ အတန်းထဲမှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ စဖြစ်လာတာ... ဆေးခန်းတွေ ပြပေမယ့် ဆရာဝန်တွေက ခုလိုမျိုးတွေ မရှင်းပြခဲ့ဘူး.. တချို့ဆရာဝန်တွေက သွေးတွေစစ်တယ်... သံချတယ်(သံလဲမတွေ့ပါဘူး)။ သောက်ဆေးတွေ ပေးလိုက်တယ်... သတိထားမိတာက မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက ပုဇွန် ပြည်ကြီးငါး စားတာနဲ့ ဖြစ်တယ်... ဖုန်နဲနဲလေးထတဲ့ နေရာသွားတာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ ငှက်ပျောသီးစားတာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ မြေပဲစားတာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ မိတ်ကပ် လူးတာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ အယ်လ်ကိုဟောလဲ ဖြစ်တာပဲ။ ဒီရောက်တော့ တခါလားပဲ ဖြစ်တာ။ ဘာဆေးမှ မသောက်လိုက်ဘူး။ ၃ နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီ။ အခုထိ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး။ အစ်ကိုနဲ့ ညီမလေးကတော့ တခါတလေ ဖြစ်နေတုန်းပဲ။
အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ မျိုးရိုးလိုက်တာလား(မိဘတွေက တခါမှ ဖြစ်တာမတွေ့ဖူးဘူး) ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ(ဘယ်လိုကုသ မှုတွေ ခံသင့်လဲ)။ သူငယ်ချင်း အချိန်ရရင် အားရင်ရှင်းပြပေးပါလား.....
ကွန်မန့်က ရှည်သွားပြီ.... :)
ပို့စ်အတွက်ရော ကွန်မန့်အတွက်ရော ကျေးဇူးနော်.... :)
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေ
အဖြူရောင်နတ်သမီး October 15, 2010 at 4:36 PM
နတ်သမီးမှာလည်း allergy ရှိတယ်..
ဖုန်မှုန့်တွေရှိတဲ့နေရာ သွားရင် တကိုယ်လုံးယားလာရော..
အရေပြားကို တခုခုနဲ့ ခြစ်မိရင်လည်း(ဖွဖွလေးနော်) ဖောင်းကြွတက်လာရော...
ဟန်နီ April 10, 2011 at 6:05 PM
Allergy အကြောင်းဗဟုသုတအဖြစ်မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပဲသက်တန့် ရေ..ဟန်နီ့ မှာလဲ Hey Fever နွေရာသီရောက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်.မျက်စိယား၊နှာခေါင်းယားနဲ့ အင်မတန်ကိုမအီမသာကြီးပါ...ဒီဓတ်မတည့်မှုကြီးက အဲလိုပဲတသက်လုံးရှိသွားမှာလား..ပျောက်အောင်ကုတဲ့နည်းမရှိဘူးလား..
ကျွန်မသားလေးကတစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်. သူ.ကိုယ်မှာအနီရောင်အဖိမ်.လေးတွေအမြဲလိုရှိနေပါတယ်..ဆရာဝန်သွားပြပြီးဆေးတိုက်လဲ...ဆေးသောက်တုံးပျောက်ပြီး..ဆေးရပ်လိုက်ရင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်.. ကလေးကငယ်သေးတော.ဆေးဒဏ်ပိမှာလဲကြောက်ပါတယ်.. ဘာလုပ်သင်.ပါသလဲဆိုတာအကြံပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....